Kedu ka Solomon Islands si hụ ọdịnihu nke njem?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Kedu ka Solomon Islands si hụ ọdịnihu nke njem?
Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Tourism Solomons na mmekota na Ministry of Culture & Tourism amalitela usoro nke ịmalite ihe CEO, Josefa 'Jo' Tuamoto 'kọwara dị ka atụmatụ ise a chọrọ iji nweghachi ma kwado akụnụba ndị njem n'ihi na ọ na-achọ ime mgbanwe na ugbu a - na biputere - COVID-19 gburugburu ebe obibi.
Atụmatụ ọdịnihu maka mpaghara ndị njem bịara were ọnọdụ na National Museum na Honiara n’izu a bụ Mịnịsta maka Omenala & njem nlegharị anya, Hon. Bartholomew Parapolo, na-agwa ndị na-ege ntị okwu gụnyere Prime Minister, Hon. Manase, Sogavare, ndị minista, ndị omeiwu na ọtụtụ ndị ama ama ama ama n’obodo ahụ nyefere ha isi okwu iji wee bido ‘Iumi Tugeda’ (mụ na gị ọnụ). ebumnobi ha bụ izipu ndị Solomon Island niile ozi nke ịdị n’otu.
N'ịgwa ndị na-ege ya ntị okwu, Mịnịsta Parapolo kwuru dị ka akụkụ nke ụzọ njem ndị njem na-eme ihe banyere nsogbu COVID-19 nwere, Mịnịstrị nke Omenala na njem nlegharị anya amalitela ime ihe ndị dị mkpa dịka mba ahụ na mpaghara ndị njem na-amalite idozi n'ime ' ọhụụ ọhụrụ 'nke na-akpụzi ụzọ ndị Solomon Islands si azụ ahịa,
Ndị a, ka o kwuru, gụnyere mmepe nke usoro nlekọta na ụkpụrụ ndị ọzọ maka ụlọ nkwari akụ ebe a na-anabata ndị ọbịa na ndị njem na ndị njem na mmekorita na Ministụ Ahụike na Ọrụ Ahụike.
“Usoro ndị a ga-ahụkwa mwepụta nke ụkpụrụ ọhụrụ dịka akụkụ nke usoro mmemme njem nlegharị anya kacha nta (nke ebidoro na 2018) yana mmepe nke usoro iwu ọhụụ ọhụụ maka ịbanye mba ahụ maka ndị njem na ngwongwo ha. kwuru.
"Usoro ogbugba ndu a ga-adabara ndị ọbịa tupu ha apụ site na obodo ha rue mgbe ha si mba anyị pụọ na usoro iwu niile iji hụ na ahụmịhe onye ọbịa ọ bụla na Solomon Islands na-ejikwa ahụike maka ndị ọbịa na ndị ọrụ njem."
N’ikwu okwu na mmemme ahụ, onye isi ụlọ ọrụ Tuamoto kwuru na mwepụta nke ‘Iumi Tugeda’ nyere nnukwu ihe ngosi maka ngalaba ndị njem iji gosipụta ihe ọ rụzuru ruo ugbu a ma ka na-eme ka ọ na-ele anya iji kwekọọ na ‘ọhụụ ọhụrụ’.
"Anyị lekwasịrị anya, ma nwee obi ike ikwu banyere ụkpụrụ anyị, ugbu a bụ ịmụta ibi na COVID-19," ka o kwuru.
“Eziokwu a dị mkpa ebe ọ bụ na o siri ike ịnakwere ga-abụrịrị ụkpụrụ anyị, ma anyị kwesịrị ịnakwere na anyị ga-ebi na COVID-19 na arụ ọrụ anyị kwa ụbọchị ruo oge ụfọdụ.
“A ga-ahazi ikpo okwu nke atụmatụ a na ntọala nke atụmatụ ise a na-ekwu maka ya ugbu a na ministri ka ọ lekwasị anya na nnabata ụlọ ọrụ ndị njem.
"Industrylọ ọrụ ndị njem njem anyị agabigala ọtụtụ ọgba aghara kemgbe ọtụtụ afọ, mana anyị na-apụta mgbe niile, ọ ga na-apụta, n'ọnọdụ ka mma."
Dị ka ọdịnala gafee South Pacific otu akụkụ dị mkpa nke mkpọsa ahụ bụ abụ a na-akpọ 'Iumi-Tugeda megide COVID-19' nke ndị na-ese ihe na mpaghara mejupụtara ma rụọ ọrụ na nke mbụ na ihe omume ahụ.